30th Anniversary yeChikwata Chemufirimu "Ndine danho hombe!" | Ota Ward Cultural Promotion Association
Iyo bhaisikopo "Ndine yakakura danho!" Iyo yemaminetsi makumi mapfumbamwe-maminetsi bhaisikopo iyo Ota Ward Cultural Promotion Association yakashanda pariri kurangarira makore makumi matatu ekutanga kwayo.
Mutungamiriri anotungamira akasarudzwa neyekuongorora nekutora pachena.
Vazhinji vagari vewadhi vanoita sevanowedzera, uye vazhinji vacho vanopfurwa muOta Ward.
Screening imhando nyowani yemuvhi iyo chero munhu yaanogona kuona yemahara kuburikidza nemitambo uye internet.
Mutungamiriri ndiDaisuke Miki, uyo akahwina iyo Grand Prix pamitambo mizhinji yemafirimu senge TAMA NEW WAVE uye inogadzira anopfuura zana emakambani epamhepo pagore.
Gara munzvimbo yeruzhinji yetsika, iri mutambo unonakidza pamwe nekuseka uye misodzi inomhanya kusvika mukuvhunduka kwekupedzisira! !!
"Kuba danho! Iwe ndiwe mutambi anotungamira!"
Hana Niwano, uyo anoshanda kwechinguva pane imwe shopu yekroquette chinangwa chekuve mutambi wenhau, anosvikirwa rimwe zuva neharahwa risinganzwisisike, Kusaburo, asina tarisiro yeupenyu.
Kusaburo, uyo anoda kuzadzisa chiroto chake chekutungamira nhandare yemitambo nemukadzi wake mushakabvu, anoedza kutora danho iri nekutarisa kapepa ke "30th Anniversary Theatre Chiitiko" chaakaona pane imwe tsika iri pedyo. .
Musoro wedariro ndi "Chishamiso Munhu". Iri ibasa rine mukurumbira rinotungamirwa nenyaya yechokwadi yaHelen Keller, uyo akakunda hurema hwakaremara hwe "asingaonekwe," "asinganzwike," uye "asinganzwike," uye Muzvinafundo Sullivan, "mushamisi anoita" uyo akamupa chiedza.
Nenzira iyi, kudzidziswa kukuru nasekuru kwakatanga kuve mutambi wemuchitambo.
Zvinoita here kunyudza danho?Ndeipi iri danho rasekuru rekutora rakarasikirwa nehupenyu hwake? ??
Hana Niwano Musikana anorota kuve mutambi.Iye ane tarenda, asi kana achitya, anohotsira.
Akazvarwa muNagasaki Prefecture mu2000.Semutambi, ari kushingairira muTV, mafirimu uye kushambadza. Mafirimu matatu achaburitswa muna 2017.Kuonekwa kukuru kunosanganisira CX "Inonakidza TV Sukatto Japan", kushambadzira "Kirin", "SONY", "Ginza Ruvara", nezvimwe.
Himeko Yukitani Mukuru weHana pabasa renguva pfupi.Ndanga ndichivavarira kuve mutambi kwemakore mazhinji.
Akazvarwa muOta Ward.Mutambi wenhau ari weGadzira Jinrikisha.Inotaridzwa mumabhaisikopo "Instant Swamp" (2005), "Turtles Dzinokurumidza Kushamisa" (2005), "Tupukanana Tusina Kunyorwa Mubhuku reMifananidzo" (2007), "Achilles and the Turtles" (2008), "Nekonin" (2017 ) Uye zvimwe zvakawanda.
Saburo Ota (anowanzozivikanwa sekuru)
Aimbove ari munharaunda yemitambo.Kutsunga kuita danho rembavha kuti azadzise kurota kwake nemukadzi wake mushakabvu
Inoitwa sebasa rehupenyu muhoro wemubhadharo rakugo wakatsiva murume-mumwe conte uye wekare rakugo nenguva dzazvino.Mumiririri anoshanda: Mafirimu "Vana Vanodzoka", "Murume Wangu", "Gomo Tsurugidake", TV "Sansu Detective Zero", "Naoki Hanzawa", nezvimwe.
Tamatsutsumi Mumwe anonyumwira director asiri mukadzi kana asina hunhu nemari.
Mushure mekushanda se rakugoka muTachikawa maitiro, akabatana neuto raTakeshi.Pamusoro pekuva tarenda uye mutambi, ndiye munyori wechinyorwa chemufirimu "Kuzviuraya Bhazi" uye director uye screenwriter yemuvhi "Shichinin no Tomura". Akanyora nhoroondo muna 2012.Iye ndiye munyori we "Pavlov's Man".
Mutungamiriri: Daisuke Miki
Mumiririri Director we Movie Impact Co., Ltd.Iyo bhaisikopo rinoshanda "Misodzi ye Cyclops", "Yangu", "Yokogawa Suspense", nezvimwe zvinoburitswa mumitambo.Iye anogadzira mifananidzo isina kusungwa nemhando, senge vatungamiriri vemamuvhi, madhairekitori epaTV, uye vatungamiriri vezvokutengeserana.
Iyo bhaisikopo "Ndine danga hombe!" Rave kuwanikwa paYouTube!
Tsvaga YouTube kubva kune yako smartphone, piritsi, kana chimwe chigadzirwa!
Ehe unogona kunakirwa mahara.
YouTube "Ndine danho hombe! (4K shanduro)" (96 maminitsi)
YouTube "Ndine danho hombe! (Trailer)"
Dzvanya apa uwane chaiyo saiti yeiyo bhaisikopo "Ndine iro hombe danho!" !!